ယူနိုက်တက် ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား ရမရ စူပါကွန်ပျူတာကဘယ်လိုတွေခန့်မှန်းပေးထားလဲ ??? – MAN U FAN CLUB
ယူနိုက်တက် ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား ရမရ စူပါကွန်ပျူတာကဘယ်လိုတွေခန့်မှန်းပေးထားလဲ ???
August 30, 2021 Kaung Thant Articles 0
ယူအီးအက်ဖ်အေရဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်အုပ်စုအဆင့်မဲခွဲမှုမှာအသင်းကြီးအများစုကအုပ်စုကျပ်ထဲကျရောက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။စူပါကွန်ပျူတာ 538 က မန်စီးတီးဟာချန်ပီယံဖြစ်နိုင်ခြေ၁၆ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ထိပ်ဆုံးမှာရပ်တည်နေတယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
၎င်းရဲ့ နောက်မှာ ဂျာမန်ဘီလူးကြီး ဘိုင်ယန်မြူးနစ် အသင်းက ၁၁% နဲ့ ရပ်တည်နေပါတယ်။လက်ရှိချန်ပီယံ ချဲလ်ဆီး အသင်း က ၁၀%နဲ့ အဆင့် သုံး နေရာမှာရပ်တည်နေပြီး၊ လီဗာပူး အသင်းက ၉% နဲ့ အဆင့် လေး၊
ဘာစီလိုနာ အသင်းက ၈% နဲ့ အဆင့် ၅မှာရှိပါတယ်။
ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် အသင်းက 6% နဲ့ အဆင့် ၆၊ ရော်နယ်ဒို ကို ခေါ်ယူနိုင် ခဲ့ တဲ့ ယူနိုက်တက်အသင်း က အေဂျက် အသင်း နှင့် အတူ အဆင့်7နေရာမှာ ၅%နဲ့ ရှိပါတယ်။
ယူႏိုက္တက္ ခ်န္ပီယံလိဂ္ဖလား ရမရ စူပါကြန္ပ်ဴတာခန႔္မွန္းခ်က္
ယူအီးအက္ဖ္ေအရဲ႕ ခ်န္ပီယံလိဂ္အုပ္စုအဆင့္မဲခြဲမႈမွာအသင္းႀကီးအမ်ားစုကအုပ္စုက်ပ္ထဲက်ေရာက္ေနတာေတြ႕ရပါတယ္။စူပါကြန္ပ်ဴတာ 538 က မန္စီးတီးဟာခ်န္ပီယံျဖစ္ႏိုင္ေျခ၁၆ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ထိပ္ဆုံးမွာရပ္တည္ေနတယ္လို႔ ခန႔္မွန္းထားပါတယ္။
၎ရဲ႕ ေနာက္မွာ ဂ်ာမန္ဘီလူးႀကီး ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္ အသင္းက ၁၁% နဲ႔ ရပ္တည္ေနပါတယ္။လက္ရွိခ်န္ပီယံ ခ်ဲလ္ဆီး အသင္း က ၁၀%နဲ႔ အဆင့္ သုံး ေနရာမွာရပ္တည္ေနၿပီး၊ လီဗာပူး အသင္းက ၉% နဲ႔ အဆင့္ ေလး၊ ဘာစီလိုနာ အသင္းက ၈% နဲ႔ အဆင့္ ၅မွာရွိပါတယ္။
ရီးရဲလ္မက္ဒရစ္ အသင္းက 6% နဲ႔ အဆင့္ ၆၊ ေရာ္နယ္ဒို ကို ေခၚယူႏိုင္ ခဲ့ တဲ့ ယူႏိုက္တက္အသင္း က ေအဂ်က္ အသင္း ႏွင့္ အတူ အဆင့္7ေနရာမွာ ၅%နဲ႔ ရွိပါတယ္။ အဲဒီ​ေနာက္မွာ​ေတာ့ လိုက္ဇစ္က၄%၊ပီအက္စ္ဂ်ီ၊ေဒါ့မြန္၊အက္သလက္တီကို၊အင္တာမီလန္တို႔က၄%ရရွိထားပါတယ္။
ရော်နယ်ဒို၊ ယူနိုက်တက် ၊ ဂျူဗင်တပ်စ်တို့ ပျော်နေရင် ရပါပြီ ဆိုတဲ့ မော်ရင်ဟို
ဘာပေ၊ ဂျိမ်းစ်နှင့် အခြား အပြောင်းအရွှေ့သတင်းတိုများ